Isithuthuthu setyathanga, iRoller Chain, iDrive Chain - Jinhuan
Kuthunyelwe kwelinye ilizwe
Iimveliso zithengisa kakuhle kwilizwe liphela kwaye zithunyelwa kuMzantsi-mpuma Asia, eMzantsi Melika, e-Afrika nakweminye imimandla.
Uphawu "Jinhuan" kunye "Jinhong" brand amatyathanga eziveliswa mveliso amkele imigangatho yesizwe (GB) kunye nemigangatho yamazwe ngamazwe (ISO)
Ezona mveliso ziphambili zomzi mveliso ziludidi oludityanisiweyo kunye no-B, ikhonkco lesithuthuthu, ikhonkco lokuhambisa eliqhelekileyo kunye nelingaqhelekanga, ikhonkco leplate, ikhonkco loomatshini bezolimo kunye neetyathanga ezahlukeneyo ezizodwa.
Sinikezela uluhlu olubanzi lwemigca yemveliso
(B Series Yima enye) Pitch emfutshane Precision Ro ...
(A Series Stand enye) Pitch emfutshane Precision Ro ...
I-Zhejiang Jinhuan Chain Manufacturing Co., Ltd. yasekwa ngo-Okthobha u-1993, li-R & D yobuchwephesha kunye neshishini lokuvelisa. Umzi-mveliso ugubungela ummandla opheleleyo weemitha zesikwere ezingama-20000, kunye nee-asethi ezizinzileyo ezingaphezu kwezigidi ezingama-30 ze-yuan, iiseti zezixhobo ezingaphezu kwama-200, abasebenzi abangaphezulu kwe-100 kunye namandla emveliso angaphezulu kweemitha ezili-10 ngonyaka. Uphawu lwe "Jinhuan" kunye ne "Jinhong" yemixokelelwane yophawu eveliswe ngumzi mveliso yamkela imigangatho yesizwe (GB) kunye nemigangatho yamazwe aphesheya (ISO). Iimveliso zithengisa kakuhle kwilizwe liphela kwaye zithunyelwa kuMzantsi-mpuma Asia, eMzantsi Melika, e-Afrika nakweminye imimandla.
Inkampani ithathe inxaxheba kwi-exhibitio ...
Inxalenye enkulu yobomi benkonzo c ...
Amanqwanqwa e-roller ojikelezayo ngokufutshane, Isithuthuthu seDrive Chain, Icala lasekunene leCandelo leSithuthuthu, Ityhuna eliqhutywa zizithuthuthu, Eyona ndlela ihamba kakuhle ngesithuthuthu, Precision mqengqeleki chain,